(trg)="1.1"> တောင် ​ အာ ​ ရှ ၊
(src)="1.2"> Blog Action Day ist eine Veranstaltung , die jedes Jahr am 15 . Oktober die Blogger weltweit zusammenbringt , um am selben Tag über das gleiche Thema zu berichten .
(trg)="2.3"> တောင် ​ အာ ​ ရှ ​ မှ ဘ ​ လော့ဂ် ​ ရေး ​ သူ များ ​ စွာ ​ သည် ​ လည်း ဤ ​ အစီ ​ စဉ် ​ တွင် ပါဝင် ​ ခဲ့ ​ ကြ ​ သည် ။
(src)="3.2"> Es war schon immer ein Segen und Fluch für die gesamte Nation gewesen .
(trg)="5.2"> နိုင်ငံ ​ ၏ အကျယ်အဝန်း ​ အတွက် အစဉ် ​ အမြဲ အကျိုး ​ နဲ့ အပြစ် ဖြစ်လာ ​ ခဲ့ ​ သည် ။
(src)="3.3"> Nordindien bringt das Wasser in die Welt .
(src)="4.5"> Es gab keine 24/7 Wasser Konzepte und jeder Haushalt musste sein eigenes Stückchen Land bestellen .
(trg)="6.2"> မ ​ လုံလောက် ​ ခြင်း ၊
(src)="5.2"> In Indien hat die Sulabh Bewegung eine Revolution im Bereich der Abwasserentsorgung ausgelöst .
(trg)="7.4"> မိုး ​ ရေ ​ အောက် ​ မှ ပျော်ပွဲ ​ ရွှင် ​ ပွဲ ​ များ ၊
(trg)="7.8"> ကျွန်တော် ​ တို့ ​ သည် ဗ ​ ဟု ​ သုတ ၊
(trg)="7.9"> အသိ ​ တရား ​ နှင့် တာဝန် ​ ကျေ ​ မှု ​ တို့ ​ ကို သုံး ​ ၍ ကမ္ဘာ ​ မြေကြီး ​ အား လောက ​ ငရဲ ​ အဖြစ် ​ သို့ ပြောင်း ​ ပစ် ​ နေ ​ ကြ ​ ခြင်း ​ သာ ဖြစ် ​ သည် ။
(src)="6.5"> Marvi Quelle im Malir Dorf in der Tharparkar Wüste von Sindh .
(trg)="3.6"> EFF , Free Press , Access နဲ့ Cheezburger .
(trg)="3.7"> တောင် အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာ ပါ ⁠ ပါတယ် ။
(trg)="5.1"> ကျွန်ုပ်တို့သည် လွတ်လပ် ၍ ပွင့်လင်းမြင်သာသော အင်တာနက်သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကမ္ဘာတစ်ခုကို ယူဆောင်လာနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည် ။
(trg)="5.2"> အင်တာနက်ကို ဆက်လက်ပြီး လွတ်လပ် ၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိစေရန် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ ၊
(trg)="5.4"> ကျွန်ုပ်တို့သည် ၄င်း အဖွဲ့အစည်းအသိုင်းအဝိုင်းများက ပို ၍ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်း ၊
(trg)="5.5"> ပို ၍ ဆန်းသစ်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းနှင့် ပို ၍ ပွင့်လင်းမြင်သာသော လူမှုပတ်ဝန်းကျင်များကို သယ်ဆောင်လာနိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည် ။
(trg)="7.2"> ၄င်းတို့နှင့်ပတ်သက် ၍ သဘောတူကြ ၊
(src)="8.1"> Äußerung : Das Internet darf nicht zensiert werden .
(trg)="7.5"> ကိုယ်ပိုင်မူဝါဒများ အဖြစ်ပြောင်းလဲကြပါ ၊
(trg)="12.1"> ထုတ်ဖော်ခြင်း ၊
(src)="12.1"> Privatsphäre : Schützt die Privatsphäre und verteidigt das Recht des Einzelnen , die Nutzung seiner Daten und Geräte zu kontrollieren .
(trg)="2.1"> အပ်ချည်များ ၊
(trg)="2.4"> ဂွါဒလာဂျာရာနှင့် မက္ကစီကိုမြို့တော်တို့ကဲ့သို့ မြို့များတွင် အသက်အရွယ်မရွေး အမျိုသား ၊
(trg)="2.5"> အမျိုးသမီးများသည် စုပေါင်းပန်းထိုးခြင်းတွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ပတ်သက်သော ၄င်းတို့ ၏ အတွေ့ကြုံနှင့် အမြင်များကို မျှဝေရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည် ။
(trg)="3.1"> လီ ⁠ လီယာနာ ဆန်းချက်က မက္ကစီကိုစီးတီးတွင် ဘိုဟီးမီးယန်း အနုပညာဆန်သော အနီးတဝိုက် လမ်းလျှောက်ရင်း ထိုလှုပ်ရှားမှုကို တွေ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သူ့ဘလော့ ( ဂ် ) ဖြစ်သော Yo también quiero opinar တွင် ဖော်ပြထားသည် ။
(src)="1.1"> Japan : Frauen aus Fukushima kämpfen gegen Atomkraft
(trg)="1.2"> ဖူ ​ ကူ ​ ရှီး ​ မား ​ မှ အမျိုးသမီး ​ များ ​ က အဏုမြူ ​ စွမ်း ​ အင် ဆန့်ကျင် ​ ရေး ​ အတွက် စုရုံး
(trg)="1.2"> ၁ ​ ၉ ​ ၇ ​ ၉ ​ က ​ စ ​ သော ဟီ ​ ဂျပ် ​ ခေါင်း ​ ဆောင်း မ ​ ဆောင်း ​ မ ​ နေ ​ ရ ​ ဥပဒေ ​ ကို ဆန့်ကျင် ​ ခြင်း
(trg)="1.3"> ၁၉၇၉ခုနှစ်တွင် အာဏာရယူပြီးမကြာမီတွင်ပင် အစ္စလာမ်မစ်အစိုးရက အီရန်အမျိုးသမီးများကို ခေါင်းဆောင်း ( ဟီဂျပ် ) မဝတ်မနေရဝတ်စေရန် သတ်မှတ်ခဲ့သည် ။
(src)="2.1"> Am 10 . Juli 2012 starteten die “ Iranischen Liberalen Studenten und Absolventen “ eine Kampagne auf Facebook .
(src)="2.2"> Ihr Ziel ist es , zum verbindlichen Tragen des Hidschabs „ Nein “ zu sagen .
(trg)="1.4"> ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကြာပြီးနောက်တွင် အီရန်ရဲများက နွေရာသီတိုင်းတွင် လူများဝတ်စားဆင်ယင်ပုံကို ဆက်လက်တင်းကျပ်ရန်အတွက် ခေါင်းဆောင်းနှိမ်နင်းမှုများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည် ။
(src)="3.1"> Die Seite " Unveil women's right to unveil " ( " Enthüllt das Recht der Frauen auf Enthüllung " ) hat bereits über 26.000 „ Gefällt mir“-Vermerke erhalten .
(trg)="2.2"> ဇူလိုင်လ ( ၁၀ ) ရက်နေ့တွင် မဝတ်မနေရဟီဂျပ်ဥပဒေကို ဆန့်ကျင်ရန်အတွက် " အီရန်လူမျိုး လစ်ဘရယ်ကျောင်းသားများနှင့် ဘွဲ့ရများ " က ဖေ့ ( စ် ) ဘွတ် ( ခ် ) လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကို စတင်ခဲ့သည် ။
(trg)="3.1"> " လှစ်ဟနိုင်ဖို့ အမျိုးသမီးများအခွင့်အရေးကို လှစ်ဟခြင်း " စာမျက်နှာသည် လက်ရှိအချိန်ထိ ကြိုက်သူပေါင်း ( ၂၆၀၀၀ ) ရရှိထားပြီးဖြစ်သည် ။
(trg)="3.2"> အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားရာကျော်တို့က ၄င်းတို့ ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံများ ၊
(trg)="3.3"> အတွေ့အကြုံများနှင့် မှတ်ျချက်များကို ဝေမျှခြင်းဖြင့် စာမျက်နှာ ၏ အမှတ်အသားကို ထပ်မံဖြည့်စွက်ပေးခဲ့သည် ။
(trg)="3.4"> အချို့က ခေါင်းဆောင်းဆောင်းရခြင်းကို နှစ်ခြိုက်ပြီး အချို့က မနှစ်သက်ကြပေ ။
(trg)="3.5"> သို့ရာတွင် အားလုံးက ခေါင်းဆောင်းဝတ် ၊
(trg)="3.6"> မဝတ် ရွေးချယ်ခြင်းသည် ၄င်းတို့ ၏ အခွင့်အရေးသာ ဖြစ်သင့်သည်ဟု သဘောတူကြသည် ။
(trg)="6.3"> လမ်းတိုင်းနှင့် လမ်းကြားတိုင်းတွင် အထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များထားရှိခြင်းဖြင့် အစိုးရသည် အုပ်ချုပ်သူ ၏ သဘောထားကျဉ်းမြောင်းသော သတ်မှတ်မှုများနှင့် စံနှုန်းများကို အမျိုးသမီးများအား လက်ခံကျင့်သုံးစေရာတွင် အာဏာကုန်သုံးခဲ့သည် ၊
(trg)="6.4"> အမျိုးသမီးများအား ရှက်ကြောက်မှုကို ခံစားရစေပြီး အရာဝတ္ထုများသဖွယ် ဆက်ဆံခဲ့သည် ။
(src)="6.5"> Jedes Jahr im Sommer müssen wir eine neue Welle brutaler Razzien gegen Frauen miterleben .
(src)="7.1"> “ Iranische Liberale Studenten und Absolventen “ startet in Solidarität mit iranischen Frauen die „ Nein zum verbindlichen Hidschabtragen “ Kampagne , um die Kleidungsfreiheit zu betonen .
(trg)="6.5"> အီရန်အမျိုးသမီးများက ထိုလူသားမဆန်သော ဥပဒေနှင့် လုပ်ဆောင်မှုများကို အစဉ်ဆန့်ကျင်ပြီး မလိုက်နာခဲ့သော်လည်း ဖိအားပေးလိုက်နာခိုင်းသူများကမူ မည်သည့်အခါကမျှ သင်ခန်းစာကို မသင်ယူခဲ့ပေ ။
(trg)="6.6"> နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း နွေရာသီတွင် အမျိုးသမီးများအပေါ် ၌ ပိုမိုပြင်းထန်သော နှိမ်နင်းမှုများကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့မြင်နေရသည် ။
(trg)="7.2"> ကျွန်တော်တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်လိုသူ အဖွဲ့အစည်းတိုင်းနှင့် လူတိုင်းကို နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည် ။
(trg)="7.3"> နာနီ စာမာက အီရန်နိုင်ငံ ၏ မြို့တော် တီဟီရန်ရှိ လာလယ် ပန်းခြံမှ လတ်တလောအတွေ့အကြုံကို မျှဝေထားသည်မှာ
(trg)="7.4"> ကျွန်မက အဲဒီမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရယ်မောနေကြတာ ၊
(trg)="7.11"> ဒါပေမဲ့ ကျွန်မကို ပန်းခြံကနေ သူတို့တွေရံပြီး ထွက်ခွာခိုင်းတဲ့အချိန်မှာ တွေ့ခဲ့တာရှိတယ် ။
(trg)="7.12"> ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးတွေကို ကျွန်မတွေ့လိုက်တာ ၊
(trg)="7.16"> ပန်းခြံထဲမှာ ကောင်လေးတွေနဲ့ ကောင်မလေးတွေ အတူတူ ဘောလုံးကစားကြလို့ ကျွန်မတို့ကို ကန်ထုတ်ခဲ့တဲ့ လုံခြုံရေးတွေကပဲပေါ့ ။
(src)="7.12"> Nafiseh teilte mit , dass sie ihr eigenes Foto hochgeladen hatte , in dem sie einen Schleier anhat .
(src)="7.13"> Die Überschrift lautet : „ Auch wenn ich einen Schleier trage , habe ich kein Recht dazu , es von anderen zu verlangen “ .
(trg)="7.24"> နာဖီဆက်က ခေါင်းဆောင်းဆောင်းထားသော ၄င်း ၏ ဓာတ်ပုံကိုတင် ၍ " ကျွန်မက ခေါင်းဆောင်းဆောင်းတယ်ဆိုရင်တောင် တခြားလူတွေကို ( ဆောင်းဖို့ ) ဖိအားပေးဖို့ အခွင့်အရေး ကျွန်မမှာ မရှိပါဘူး " ဟု ရေးသားခဲ့သည် ။
(trg)="8.1"> အာဖစနယ်က ပြောသည်မှာ ၊
(trg)="8.2"> ကျွန်တော်က အီရန်ကို ဟီဂျပ်မဝတ်မနေရ မသတ်မှတ်တဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်စေချင်ပါတယ် ။
(trg)="8.3"> ဟီဂျပ်ဝတ်တာကို ထောက်ခံတဲ့သူတွေရော ဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေပါ သူတို့တွေရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံကို ကြိုက်သလို ရွေးခွင့်ရှိသင့်ပါတယ် ။
(trg)="8.4"> လူတိုင်းက တခြားရှင်သန်နေထိုင်မှုပုံစံတွေကို လက်ခံလေးစားရပါမယ် ။
(trg)="8.5"> ( ဖြစ်နိုင်တာက တချို့ ) ယောက်ျားတွေက ခေါင်းဆောင်းလှစ်ဟထားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို မြင်တဲ့အခါ လိင်စိတ်ကြွလာတယ်ဆိုတာက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး ။
(trg)="8.9"> အီရန်သတင်းစာ အီတယ်လတ်က ဟီဂျပ်မဝတ်မနေရသတ်မှတ်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်သော တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး တော်လှန်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သူတစ်ဦးဖြစ်သည့် အယာတိုလာ မာမွတ် တာလယ်ဂါနီပြောသည်များကို ကောက်နုတ်ဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ။
(trg)="8.10"> သူက ခေါင်းဆောင်းမပါသော အမျိုးသမီးများကို ဒုက္ခပေးသူများသည် တော်လှန်ရေး ၏ ဆန့်ကျင်သူများဖြစ်သည်ဟု ဆိုခဲ့သည် ။
(trg)="10.2"> မတ်လတွင် တီဟီရန်ရှိ ဆန့်ကျင်မှုတွင် ဆန္ဒပြခဲ့ပြီး အာဏာပိုင်ထောက်ခံသူများမှ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းကို ခံခဲ့ရရာမှ ခေါင်းဆောင်းမဆောင်းမနေရဆောင်းခြင်းကို ဆန့်ကျင်ရုန်းကန်မှုသည် စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ။
(trg)="10.3"> အကြမ်းဖက်မှုက အောင်မြင်ပြီး ခေါင်းဆောင်းမဆောင်းမနေရဥပဒေကို ပြဌာန်းခဲ့သည် ။
(src)="9.3"> Das Verlangen der Frauen nach einer freien Wahl herrscht jedoch trotz der Repressionen vor .
(trg)="10.4"> သို့သော်လည်း အမျိုးသမီးများ ၏ လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်မှုကို ဆန္ဒရှိခြင်းက ဖိနှိပ်မှုကို ကျော်လွန် ၍ ပျံ့နှံ့တည်ရှိနေသည် ။
(src)="1.1"> Tadschikistan : ' Halloween ist nicht für Patrioten '
(trg)="1.1"> တာ ​ ဂျစ် ​ ကစ္စ ​ တန် ၊
(trg)="1.4"> သို့သော်လည်း နိုင်ငံတွင်းတွင် အားလပ်ရက်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ ဆင်ယင်ကျင်းပမှုများက လူအချို့ကို မသက်မသာ ခံစားရစေသည် ။
(src)="2.1"> ' Fremdartiger ' Feiertag
(trg)="2.1"> ' သူစိမ်းပြင်ပြင် ' အားလပ်ရက်
(src)="3.1"> Am 31 . Oktober gab der Blogger Bachai Sako den Ton für eine Diskussion auf blogiston.tj an .
(trg)="3.1"> အောက်တိုဘာလ ( ၃၁ ) ရက်နေ့တွင် ဘလော့ ( ဂ် ) ရေးသူတစ်ဦးဖြစ်သော ဘာချိုင် စာကိုသည် blogiston .
(trg)="3.3"> သူငယ်ချင်းများနှင့် ဟယ်လိုဝင်းပွဲကို ကျင်းပရန် စိတ်အားထက်သန်နေသာ သူ ၏ သားကြောင်း စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရသော ဘာချိုင်က ထိုအားလပ်ရက်သည် ဗာဟီရဝါဒကို မြစ်ဖျားခံလာပြီး အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ကြောင်းကို ရေးသားခဲ့သည် ။
(trg)="3.4"> ပြီးနောက် ဘာချိုင် စာကိုက ထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့သည်မှာ ၊
(trg)="3.7"> အဲလိုဆိုတော့ ဒီဟာက တာဂျစ် ( ခ် ) အမျိုးသားရေးနဲ့ အစ္စလာမ် အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ ရိုးရာတန်ဖိုးတွေနဲ့ လုံး ⁠ လုံးကို သွေဖီနေတယ် ။
(trg)="3.8"> ကျွန်တော်တို့တွေက မျိုးဆက်သစ်တွေကို ဟယ်လိုဝင်းဆိုတာ တာဂျစ် ( ခ် ) လူမျိုးတွေနဲ့ မူဆလင်တွေအတွက် သူစိမ်းပြင် ⁠ ပြင်ပါ ။
(trg)="3.9"> နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့ ဂုဏ်ယူတတ်တဲ့ တာဂျစ် ( ခ် ) ယောင်္ကျားလေးတွေနဲ့ မိန်းကလေးတွေက ဒီသူစိမ်းပြင်ပြင် အားလပ်ရက်ကို ဘယ်တော့မှာ မကျင်းပသင့်ဘူး ။
(trg)="3.10"> ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်သူ မာ့ ( ခ် ) ဘလူအာက တာဂျစ်ကစ္စတန် တောင်ပိုင်း ၊
(trg)="3.11"> ခါဂန်တယ်ပါရှိ ဟယ်လိုဝင်းပါတီတစ်ခုတွင် ရိုက်ကူးခဲ့သော ဓာတ်ပုံဖြစ်သည် ။
(trg)="3.12"> ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အသုံးပြုထားသည် ။
(trg)="4.1"> ဘာချိုင် စာကို ၏ စာတွင် မှတ်ချက်ပေးလျက် အခြားတာဂျစ် ( ခ် ) ဘလော့ ( ဂ် ) ရေးသူတစ်ဦးဖြစ်သူ တီယိုကရတ်က သဘောတူခဲ့သည်မှာ
(trg)="4.2"> ငါတော့ မင်းနဲ့ သဘောတူတာပဲ ။